Rocky Linux 8.4 yekutanga RC yakatoburitswa | Linux Vakapindwa muropa
La Rocky Enterprise Software Foundation (RESF) yakaburitsa kuburitswa kwekutanga kusunungurwa mumiriri (RC) weRocky Linux 8.4 iyo inosvika mushure memazuva mashoma eshanduro 8.3 RC. Uye ndezvekuti mune iyi nyowani vhezheni yakaburitswa kururamisa kwakasiyana siyana, optimizations akaitwa uye, pamusoro pezvose, kuvimbika kwesystem kwakagadziridzwa.
Kunyangwe izvi, Izvo zvakakosha kuti uzive kuti parizvino kugovera hakuna kukodzera kushandiswa kwezuva nezuva, sezvo kuchine matambudziko akati wandei uye kunyanya panogona kunge paine mamwe maBUG asina kuwanikwa. Ndokusaka aya marudzi ekuburitswa ari ekuongororwa chete uye kune avo vanofarira kutora chikamu mukutsvaga zvikanganiso, vanogona kumhan'ara matambudziko anowanikwa zvakananga mu Rocky Linux maforamu.
Kunyange zvichitevera chiziviso yekusunungurwa kweRC idzi mazuva ano, iyo RESF Nheyo, inotungamirwa naCentOS co-muvambi Gregory Kurtzer, tsanangura zvakatanga mune tambo yekutaura pane Red Hat blog muna Zvita 2020 yakura ikava nharaunda yevanhu vanopfuura zviuru gumi muzuva remazuva.
Kubva ipapo, zvikwata zvakakura zvakakomberedza zvigadzirwa, kushambadzira, webhusaiti, budiriro, mapoka anokosha, nezvimwe. Kubva muna Kukadzi 2021, anopfuura mamirioni makumi masere ekushanyirwa akange akanyorwa pane akasiyana mapuratifomu enhau nenzvimbo dzenhau. Uye ikozvino, mwedzi mina gare gare, isu tine yechokwadi yakavhurika bhizinesi nharaunda inoshanda sisitimu. Kupfuura izvo, isu tine nharaunda, iyo inopfuura zvakapfuura chimiro cheyakareruka Linux kugovera.
1 Nezve Rocky Linux
2 Rocky Linux 8.4 RC1 Kiyi Nyowani Mamiriro
Nezve Rocky Linux
Kune avo vachiri kusaziva kuti kugoverwa kweLinux kwakazvarwa sei, iwe unofanirwa kuziva chiiPakupera kwegore rapfuura, Red Hat yakafunga kuti mari dzayo pakutanga inoitirwa kutsigira CentOS Linux yaizoendeswa kuCentOS Stream mukati megore ra2021.
Mune mamwe mazwi, Red Hat haisati yaita kuzvipira kutsigira CentOS mushure megore ra2021. Saizvozvo, kugadziriswa kweCentOS Linux, iyo yaizopihwa kusvika Chivabvu 31, 2029, yakaunzwa padyo naRed Hat kusvika Zvita 31, 2021. Kufanana nevamwe Nechisarudzo ichi, chirongwa chitsva cheCentOS Stream chakaiswa kumusoro kwerwizi kubva kuRHEL uye Panguva imwecheteyo. nguva, CentOS Linux, iyo yaive zasi kubva kuRHEL, yakabviswa.
Kuona pachena kurasa CentOS naRed Hat, Gregory Kurtzer, co-muvambi weCentOS, yakatanga Rocky Linux chirongwa iyo inoratidza kuti kugoverwa kweCentOS hakuna kufa uye nemazita makuru akati wandei muindasitiri yetekinoroji senge Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, OpenDrives uye CIQ chikamu cheboka rinotsigira Rocky Linux mune zviwanikwa, mari, software nezvivakwa.
Nekudaro, kunyangwe mushure mekutanga Rocky Linux RC (8.3) chiitiko chakakosha chakamisikidzwa purojekiti, zvakaratidza kuti pakanga pachine zvakawanda zvekuita.
Nezve izvi, iyo RESF Foundation yakaziva izvi ikataura kuti kwaingova kutanga kwegadziriro yekusimudzira yekuvhurika kweanoshanda mashandiro sisitimu yakagadzirirwa nharaunda uye nenharaunda.
Rocky Linux 8.4 RC1 Kiyi Nyowani Mamiriro
Pane Rocky Linux 8.4 RC1 zvinotaurwa kuti kuitiswa kutsva kweye memory controller slab yakabatanidzwa yekutonga tekinoroji yeboka. Iyo slab memory controller nokudaro inovandudza mashandisiro uye inobvumira ndangariro accounting kuti ishandurwe kubva padanho repeji kusvika padanho rechinhu. Semagumo, kudonha kwakakosha mune yakazara ndangariro tsoka yetsanga uye mhedzisiro pane kupatsanurwa kwendangariro kunogona kucherechedzwa.
Uyezve, zvinotaurwa kuti IPsec VPN yakapihwa neLibreswan ikozvino inotsigira TCP encapsulation uye ekuchengetedza zvinyorwa zve IKEv2 uye kuti scap-chengetedzo-gwara mapakeji akaendeswa kune vhezheni 0.1.54 uye OpenSCAP yakaendeswa kune vhezheni 1.3.4.
Tambien Ma module matsva akawedzerwa kubva:
Chekupedzisira, zvinoonekwa zvakare kuti iyo fapolicyd fomati ikozvino inopa kutendeseka kutarisa uye iyo RPM plugin ikozvino inochekera chero sisitimu inogadziridzwa inobatwa neYUM kana iyo RPM package maneja.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo nezve iyi nyowani vhezheni kana tora iyo iso mufananidzo weiyo system, iwe unogona zviite kubva kunotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Rocky Linux 8.4 yekutanga RC yakatoburitswa